अधिकांश डिप्रेसन व्यक्ति आफैंले निर्माण गर्छन् - sailungonline
अधिकांश डिप्रेसन व्यक्ति आफैंले निर्माण गर्छन्
१८ कार्तिक २०७८, बिहीबार १९:५० । काठमाडौं
हामीले यो बुझ्न जरूरी छ कि आखिर डिप्रेशन (उदासीपन) के हो ? तपाईं उदास रहनुभयो भने, तपाईंभित्र के भइरहेको हुन्छ ? यसलाई मुलभूत रूपमा हेरौँ: तपाईंले केही भइदियोस् भन्ने अपेक्षा राख्नुभएको थियो, तर त्यसो भइदिएन ।
तपाईंले कोही व्यक्ति वा कुनै चिज तपाईंले चाहेअनुसार भइदियोस् भन्ने आशा गर्नुभयो अथवा भनौँ यो संसार वा नियति तपाईंले चाहेअनुसार भइदियोस् भन्ने अपेक्षा राख्नुभयो, तर त्यो त्यसो भइदिएन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, जे भइरहेको छ तपाईं त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, यत्ति नै हो । सायद तपाईं कोही व्यक्ति वा परिस्थितिको विरुद्धमा हुनुहुन्छ होला अथवा तपाईं स्वयं जीवनको विरुद्धमा हुनुहुन्छ होला । त्यसैअनुरूप, डिप्रेशन वा उदासी पनि झन् भन्दा झन् बढी गहिरिँदै जान्छ ।
डिप्रेशनले तपाईंलाई असाध्यै निराश बनाउँछ अनि यो विशेषगरी आत्मघाती हुन्छ । उदास मानिसहरूले आफैंलाई बढी क्षति पुऱ्याउँछन् । क्षति भन्नाले भौतिक रूपमा नै हानि पुऱ्याउँछ भन्ने होइन । जो व्यक्ति तरबार लिएर अरूलाई मार्न जान्छ, उसको अहम् खासै संवेदनशील हुँदैन-यो त्यस रूपमा रहँदैन, जति उदास व्यक्तिले त्यसलाई आफूभित्र हुर्काउँदै गएको हुन्छ ।
हिंस्रक व्यक्तिलाई सजिलै शान्त पार्न सकिन्छ । के तपाईंले बाटोतिर यस्तो देख्नुभएको छ ? जब मानिसहरू झगडा गर्छन्, यदि त्यहाँ एकजना मात्रै पनि समझदार व्यक्ति छ अनि उसले दुवै पक्षलाई शान्त पार्न सक्छ भने, एक क्षण अघिसम्म एकअर्कालाई मार्न तम्सिएका मानिसहरू अर्को क्षणमै झगडा बन्द गरेर साथी बनी आफ्नो बाटो लाग्छन् । तर, डिप्रेशनमा भएको व्यक्तिको सन्दर्भमा त्यस्तो हुँदैन-उसले एउटै कुरालाई जीवनभरी बोकिरहन्छ । चाहे उनीहरूले सचेतन रूपमा गरून् वा अनजानमा, उदास व्यक्तिहरू आफ्नो छुरीलाई अझ धारिलो बनाइरहन्छन् अनि आफ्नै मुटु छियाछिया पारिरहेका हुन्छन् । किन कसैले आफैँलाई क्षति पुऱ्याउला र ? सामान्यतया, ती मानिसहरू सहानुभूति पाउन त्यसो गर्छन् । अत्यन्तै उदास व्यक्तिलाई सामान्य सहानुभूतिले काम गर्दैन; अर्को व्यक्ति उसको पीडामा डुबिदिनु पर्ने हुन्छ ।
तपाईंभित्र त्यस्तो के छ जो दु:खी बन्छ ? यदि मैले लट्ठीले तपाईंको शरीरमा हिर्काएँ भने, तपाईंको शरीरमा दुखाइ हुन्छ, त्यो फरक कुरा हो । अन्यथा, तपाईंभित्र त्यस्तो के छ, जो दु:खी बन्दछ ? मन र भित्री प्रकृतिमा पीडा हुन सक्दैन । तपाईंको अहम् मात्र दु:खी बन्दछ । जब तपाईं `म माथि उठ्न चाहन्छु´ भन्नुहुन्छ, यसको अर्थ तपाईं आफ्नो अहम् लाई कुल्चिएर त्यसबाट अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ ।
जब तपाईं डिप्रेशनलाई स्वाभाविक प्रक्रिया भनेर उद्‌घोष गर्नुहुन्छ, अब त्यसबाट बाहिर निस्किने कुनै तरिका रहँदैन । जब तपाईं बच्चा हुनुहुन्थ्यो, तपाईंको निम्ति प्रफुल्लित र आनन्दित रहनु स्वाभाविक थियो- उदास बन्नु होइन ।
डिप्रेशन स्वाभाविक हो भनेर घोषणा नगर्नुहोस् । डिप्रेशन मतलब तपाईं आफूभित्र जीवनको उल्लासलाई कायम राख्न सकिरहनु भएको छैन । यो तपाईंको शरीरमा समेत देखिन्छ । यदि तपाईं उदास हुनुभयो भने, तपाईंको शरीर नै अस्तव्यस्त बन्दछ । तपाईंभित्रको जीवन उल्लासमय छैन— यो खस्किएको छ अनि यसले आफ्नो उल्लास गुमाएको छ, किनकि तपाईं जीवनसँग सही कार्यहरू गरिरहनु भएको छैन । तपाईं यसमा अत्यधिक मात्रामा बाहिरी बकवास थोपर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंले आफ्ना जीवन ऊर्जाहरूलाई जीवन्त र उच्चतम अवस्थामा राख्न केही पनि गर्नुभएको छैन ।
डिप्रेशन एक किसिमको यातना हो । यदि तपाईं परम–आनन्दमा हुनुको सट्टा यातनामा डुब्नुभएको छ भने, यसको कारण यो हो कि तपाईंको ऊर्जाको ठूलो हिस्सा बाध्यात्मक वा विवश रूपमा भइरहेको छ, न कि सचेतनपूर्वक । यो बाहिरी परिस्थितिहरूप्रति प्रतिक्रिया गर्ने शैलीमा भइरहेको छ । जब तपाईं बाध्यात्मक वा प्रतिक्रियात्मक रूपमा सञ्चालित रहनुहुन्छ, डिप्रेशन हुनु निकै सामान्य कुरा बन्दछ-किनभने बाहिरी परिस्थितिहरू कहिल्यै पनि शत–प्रतिशत तपाईंको नियन्त्रणमा हुँदैनन् । संसारमा कयौँ कुराहरू घटिरहेका हुन्छन् । यदि तपाईं बाध्यात्मक रूपमा प्रतिक्रया जनाउनुहुन्छ भने, त्यसमै फस्नु अनि निराश बन्नु स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्थामा जीवनका विभिन्न पक्षहरूसँग तपाईं जति बढी सामना गर्नुहुन्छ, तपाईं त्यति नै बढी दुःखी बन्नुहुनेछ ।
एउटा गरीब व्यक्तिले सोच्न सक्ला, `भोलि, यदि मैले एक जोर नयाँ जुत्ता पाएँ भने, सबैथोक ठीक हुनेछ ।´यदि उसले एक जोर नयाँ जुत्ता पायो भने, ऊ राजाझैँ प्रफुल्ल मुहार लिएर हिँड्नेछ । किनभने उसमा आशा छ, उसको निम्ति बाहिरी आवश्यकताहरू अझै सुनिश्चित भइसकेका छैनन् । सम्पन्न समाजहरूमा, बाहिरी आवश्यकताहरू सुनिश्चित गरिएका छन्, तर भित्री स्थितिमा केही गरिएको छैन । त्यसैले त्यहाँ निराशा र उदासी छ । त्यहाँ खाना छ, त्यहाँ घर छ, त्यहाँ लगाउन लुगा छ- त्यहाँ सबैथोक छ, तैपनि त्यहाँ केही न केही समस्या छ । उनीहरूले त्यो समस्या के हो भनेर पहिचान गरेका छैनन् ।
उदासीपन-अरूबाट सहानुभूति र ध्यान खिच्न !
आफूमा सन्तुलन ल्याउने सबैभन्दा सरल र उत्तम तरिका भनेको प्राकृतिक वातावरणमा धेरै भन्दा धेरै शारीरिक क्रियाकलाप गर्नु-यो सानै उमेरबाट शुरु गर्नु उचित हुन्छ । अर्को पक्ष भनेको पाँच तत्वहरू वा पञ्चतत्व (धरती, जल, वायु, अग्नि वा सूर्यको प्रकाश र आकाश) को सम्पर्कमा रहनु हो । तपाईंले जस्तो प्रकारको खाना खानुहुन्छ, त्यो पनि कारक हो, त्यसैले अत्यधिक प्रशोधित खानेकुराहरू खानुहुँदैन । त्यसैगरी, भावनाको स्तरमा असुरक्षित महसुस गर्नु पनि अर्को कारक हो, जुन आधुनिक पिँढीले भोगिरहेको छ । अहिले मानिसहरू भावानात्मक रूपमा कसैसँग पनि खासै जोडिन सक्दैनन्, किनकि कोही पनि लामो समयसम्म साथमा हुँदैनन् ।
सारमा भन्नुपर्दा, डिप्रेशन यसरी बढ्दै जानुको मुख्य कारण भनेको बदलिँदो जीवनशैली हो । चाहिनेभन्दा अति बढी खानु, पर्याप्त मात्रामा शारीरिक क्रियाकलाप नहुनु, प्रकृतिसँग नजोडिनु, पञ्चतत्वको सम्पर्कमा नरहनु, भावनात्मक रूपमा असुरक्षित महसुस गर्नु-यिनै मुख्य कारणहरूले गर्दा, आज विश्वमा डिप्रेशन वा उदासीपन व्यापक रूपमा फैलिएको छ । यदि हामीले यी कुराहरूमा ध्यान दिने हो भने, डिप्रेशन लगायत अन्य मानसिक समस्याहरू जुन रूपमा फैलिएको छ, त्यसलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न सक्छौं ।
एकै विद्यालयका २८ शिक्षक-विद्यार्थी कोरोना सङ्क्रमण, विद्यालय बन्द
स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण
हङकङमा पनि देखियो कोभिडको नयाँ भेरियन्ट, भारतसहितका देशबाट यात्रा गर्नेलाई २१ दिन क्वारेनटिन
फिदिममा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धी तालिम
बेसारले स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ !
पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिबाट कोभिड सर्छः अनुसन्धान
शनिबार नर्भिकले स्तन क्यान्सरको निःशुल्क ओपिडी सेवा दिने
अमेरिकाले अनुदान दिएको फाइजर खोप आज नेपाल आउँदै